नबिल बैंकको ३४ प्रतिशत लाभांश पारित हुदैं - Aathikbazarnews.com नबिल बैंकको ३४ प्रतिशत लाभांश पारित हुदैं -
राष्ट्र बैंकले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने
नबिल बैंकको ३४ प्रतिशत लाभांश पारित हुदैं
नबिल बैंकको ३५ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २२ गते हुदैछ । बैंकले यस वर्षको लागि ३४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
१२ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत २२ प्रतिशत नगद लाभांश यस वर्षका लागि तय गरिएको हो ।
बैंकले विहान १० बजे नेपाल पज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाडौंमा सभा बोलाएको हो । लाभांश वाहेक सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परिक्षणका लागि चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स जोशी एण्ड भण्डारीलाई पुनः नियुक्ती गर्नेछ । साथै सभाले बैंकको अधिकृत पूँजी बृद्धि गरी रू. ११ अर्ब पु¥याउने प्रस्ताव समेत पारित गर्नेछ ।
नबिलले साधारण सभा र लाभांश प्रयोजनका लागि पुस ८ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको छ । यस आधारमा पुस ७ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न योग्य भएका छन् ।
नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीमा विशाल ग्रुप, त्रिवेणी गु्रप र आईएमई ग्रुपको पक्कड, सिमित समूहको घेराउमा कैद बनेको व्यापारमा कर्पोरेट सुशासनको चुनौती ?
सिटिजन्स बैंकका अध्यक्षलाई गभर्नरद्वारा सपथ
एनएमबी दशैँ विदामा पनि खुल्ला रहने
किन जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनन् ?